Malunga ne-P & M → Imiyilo yokuhombisa ekhompyutheni eyiNgcali
Amava adityaniswe nobungcali
Indawo yokuthunga iP & M yasekwa ngo-1995 eRawa Mazowiecka. Ukususela ngo-2003. sinikezela ngeenkonzo zokuthunga, ukusika, uku-ayina kunye neelebheli. Sikwanikezela ngokusebenza kunye neempahla zentengiso.
Abasebenzi bethu abaqeqeshiweyo bagcoba iminyaka emininzi yamava, bayakuvuyela ukunceda kunye nokucebisa kuyilo kunye nokukhethwa kwendlela efanelekileyo yokumakisha - siya kuthatha nayiphi na i-oda!
Sinepaki yomatshini ebanzi, yanamhlanje neyilungiselelwe ngokufanelekileyo, apho kukho:
Oomatshini bokutshixa oomatshini bezothutho abaphantsi - oomatshini abazenzekelayo
Oomatshini bokutshixa abathengisi abahamba ngezantsi kunye nangaphezulu ngogwetyi olukhulu - oomatshini abazenzekelayo
Flat iinaliti ezimbini
Imisonto emibini yenaliti
I-3, i-4 kunye ne-5 intambo ngaphezulu
Umatshini wenaliti ezi-4 kunye nowokufaka inaliti ezili-12 ngokuthunga kwitram
Iitafile zeentsimbi zineejeneli ezinomphunga
Ukusika itafile yegumbi ngomsiki we-8,5 m ngommese othe nkqo kunye nommese webhendi
Sikhathalela owona mgangatho uphezulu weemveliso zethu
Igumbi lethu lokuthunga liyaqinisekisa ukuba iimveliso esizivelisayo zenziwe ngeyona nto iphakamileyo yelaphu kunye nezinto ezifanelekileyo zokusebenza kunye nobuchwephesha bokudaya obuphambili kunye nokugqibezela. Siyakwazi ukudibana nabakhi beekhontrakthi abafuna kakhulu ukusetyenziswa kwezixhobo esinazo. Sinamava abanzi ngokuthunga, ukucheba kunye nokuyila iiarhente zentengiso kunye neempawu ezidumileyo.
Umthengi ubaluleke kakhulu kuthi
Abathengi abonelisekileyo yeyona nto iphambili kuthi. Iingcebiso zabo ezilungileyo zisikhuthaza ukuba siqhubeke siphuhlisa kwaye sigcina umgangatho ophezulu weenkonzo zethu.
Ukusebenza kunye nokuthengisa iimpahla
Sinoluhlu olubanzi- ngaphezulu kweemveliso ezingama-6000, iimpahla zomsebenzi i intengiso kubavelisi abaziwayo ngamaxabiso anomtsalane kakhulu. Oku kubandakanya ihempe, iihempe, iivesti, ihempe, uboya, iihempe, izikipa, iimpahla zomsebenzi, iimpahla zobungcali, iimpahla zonyango, iivenkile ezibandayo kunye neefriji, kunye noluhlu olubanzi lwezihlangu.
Ukufakelwa kwekhompyuter / iimpahla zokuhombisa ngempahla
Ukuprintwa kwesikrini / iiprinta kwiimpahla